Banyere Anyị - Liaocheng Lixin Bearing Co., Ltd.
Liaocheng Lixin Bearing Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na azụmaahịa na-etinye ngwaahịa na ahịa. Ndị enyemaka ahụ gụnyere Zhongshan Lande Steel Ball Co., Ltd. na Shanghai Lande Synergies Co., Ltd. Ọ na-etinyekarị aka na mbubata na mbupụ azụmahịa nke biarin na nkenke nchara bọọlụ. Isi ngwaahịa ndị miri uzo bọl biarin, na tapered ala biarin, na cylindrical ala biarin, na onwe kwado kwado biarin, na agịga ala biarin, na-atụ bọl biarin, chrome ígwè bọl, carbon ígwè bọl, igwe anaghị agba nchara bọl na na . A na-etinye ha maka ụgbọ ala, ọgba tum tum, ngwa ụlọ, ịkwa akwa na igwe eletriki, ngwaọrụ egwuregwu, ngwa eletriki na akụrụngwa ndị ọzọ. A na-ebupụ ha n'ọtụtụ mba na mpaghara dịka Europe, America, Japan na South Korea. Anyị na-ukwuu tụkwasịrị obi na-akwado site zuru ụwa ọnụ ahịa na anyị kacha mma mma na ezigbo ọrụ.
Zhongshan Lande Steel Ball Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche na China nke nwere usoro mmepụta niile site na Germany. All ụlọ ọrụ na oyi na-atụ, na-egbu maramara, na-egweri ike, ntinye mbụ, ntinye nke abụọ, nhicha na mbukota si na SMS nke Germany. Treatmentlọ ọrụ ọgwụgwọ okpomọkụ sitere na Schwarz nke Germany. Ọ nwere ọkachamara na bọọlụ nchara dịgasị iche iche, ogo ya site na 1.00mm ruo 25.40mm, ọkwa ziri ezi site na ọkwa 5 na Grade1000.
Shanghai Lande Synergies Co., Ltd. bụ alaka ụlọ ọrụ guzobere na Shanghai. Ọ tumadi na-ekere òkè na mbubata na mbupụ azụmahịa nke metal ihe na yiri ngwaahịa, seramiiki ngwaahịa, iko ngwaahịa, plastic ngwaahịa, ngwaike ngwaahịa, ụgbọala na ọgba tum tum ngwa na na.
Adgbaso azụmahịa nkà ihe ọmụma nke "àgwà mbụ, aha mbụ, ọrụ mbụ", anyị ike a dịgasị iche iche nke ekwenye mmekọahụ na ndị ahịa n'ụlọ na mba ọzọ, nakwa dị ka a ezi aha. Anyị nwere ntọala akụ na ụba siri ike, akụrụngwa ngwaahịa bara ụba, ezigbo ndị ọrụ ọrụ. Anyị dịkwa njikere iji obi anyị niile na-akwado ndị enyi anyị gburugburu ụwa iji mepụta ọdịnihu!
Ngosi ụlọ ọrụ
Anọ ahịrị Cylindrical ala agba, Obere ọla kọpa, Cylindrical ala agba 20x47x14, Ugboro abụọ Ahịrị Cylindrical ala agba, Brass Ball Lelee Valve, Cylindrical ala agba 25x52x15,